October 12, 2019 NEWS 1
GAROOWE(P-TIMES) – Taliyaha ciidamada lugta iyo dhulka ee dawladda Soomaaliya Cabdixamiid Maxamed Dirir iyo Ciidamo ilaala oo uu wato ayaa maanta ka duulay Garoonka Diyaaradaha GAROWE, iyagoo gaaray magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya.
Ciidamadan uu horey u soo kaxeystay taliyaha cusub ee ciidamada Lugta & Dhulka ee dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa ka dhigan in ay yihiin ilaalada khaaska ah, waana markii 1aad ee uu noqdo Jagada heerkaas gaarsiisan oo ay ku wareegsan yihiin khataro waa weyn.
Sareeye Guuto Cabdixamiid Dirir oo ahaa Taliyihii ciidamada la dagaalanka Argagixisada ee PSFta loo yaqaano qeybtooda Garoowe ayaa waligiis kusugnaa mandiqadaas Puntland, oo aysan inta badan ka dhicin dagaalo la xariira argagixiso.
Xilka hadda uu la wareegayo ayaa ah mid xasaasi ah oo u baahan howlgalo deg deg ah iyo joogteynta furimaha dagaalka, waxaana horey u hayay taliyaha ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed Jen, Odowaa Yuusuf Ragge oo lagu xasuusto siduu uga dhex muuqday furimaha dagaalka.
Taliyaha cusub shaqooyin waa weyn ayaa horyaala oo ay kamid tahay iskuduba ridka iyo howlgalgalinta ciidamada dawladda Faderaalka Soomaaliya ee hadda loo diyaarinayo Howlgalka dib u xoreynta gobalka Jubbadda Dhexe oo ay caqabado badan ka sokeeyaan.
Ilaalada cusub ee u kaxeystay Muqdisho, ayaa ka dhigan welwel uu ka qabo ammaankiisa, iyadoo inta badan ay dhacaan falal Argagixiso oo lala beegsado Saraakiisha ciidamada xoogga dalka, maadaama ay mar kasta la kulmaan weeraro argagixiso.
AKHRISO: Maxaan ka naqaan Taliyaha cusub ee ciidamada Lugta & Dhulka ee Soomaaliya?
sxb iska sax juquraafiga Gobolka sanaag iyo Sida loo dego waad geftey waxaadna ku khaldan tahay Beesha Warsangeli oo ah, Beesha degta deeganada Bariga, Waqooyiga , Koonfurta iyo Galbeed OO ay ugu shishayso Ceerigaabo oo ah caasimada Gobolka.
Sidaa daraadeed dib u eegis ku samay Qoraalkaaga.
hana noqon dameeri dhaan raacday oo haku daya jeegaanta iyo hana ku hal qabsan hadalada ay ku hadaaqaan iyaga oo doonaya in ay lumiyaan Taariikhda dadka reer maakhir iyo in qofkii maqla sanaag ay tahay fariinta ugu horaysa ee Madaxiisa ku soo dhacaysa Warsangeli.